Izinto eziphathekayo: isiponji sonyango, intonga yePP
FOB Xabiso: Thethalisiwe
Ubude: Yenzelwe wena
Uhlobo lokubulala iintsholongwane: EO
I-oral care swab inencam kunye nentonga.Incam isoloko yenziwe ngesipontshi ngentloko enogwebu okanye ilaphu elingalukwanga.Kwaye isiphatho yiplastiki, ngamaplanga okanye njengoko ufuna.Umbala ukhethwa ngopinki, oblowu, omthubi, omhlophe, oluhlaza, njl njl. Ubume bulungiswa, bunokuba ngunxantathu, intyatyambo yeplam, iinkwenkwezi, i-zigzag, njl. njl. I-110mm, i-145mm, i-160mm, njl njl. I-swab esiyivelisayo ineendidi ezimalunga nama-30 ngokukodwa kushishino lwezonyango, ukhathalelo lwempilo lwemihla ngemihla, ukusetyenziswa kwamehlo kunye nokucoca i-elektroniki.I-Soft, imvakalelo yokuchukumisa kakuhle, ukhululekile ekusebenziseni ngokuhlamba umlomo kwiinkqubo zococeko lomlomo.Ngaphezu koko, inokusetyenziswa njengesixhobo soqeqesho esichukumisayo kubantwana abane-autistic.
Igama lemveliso Intonga ye-sponge yotyando elahlayo yotyando
MOQ Iziqwenga ezingama-10,000
Ingasetyenziselwa ukucoca umlomo / Ukunyamekela ngomlomo ngokuthambileyo kwiintsana kunye nabantwana abancinci okanye uqeqesho lwezempilo lolwimi lwabantwana abane-autism / ukunakekelwa komlomo kwizigulane emva kokuhlinzwa.
1. Iimveliso zonyango zobuchwephesha zenza iminyaka engaphezu kwe-10
2. Umgangatho ophezulu kunye nexabiso lokukhuphisana
3. Uyilo oluZimeleyo kunye neQela leNtengiso eBalaseleyo
4. Ukukwazi ukuNika okukhulu
5. Inkonzo egqwesileyo emva koThengiso
1.Lithini ixesha lokuhlawula?
Samkela iT/T, L/C, Western Union, Paypal, njl.
2.Linjani ixesha lokuhambisa?
Ukuba isitokhwe siyafumaneka, siya kuthumela ngaphakathi kweentsuku ze-3-5.Ukuvelisa, kuthatha malunga neentsuku ezingama-25-30 ukuhambisa.
3.Ngaba unganikezela ngezatifikethi zoqobo?
Ewe, sinokunikezela ngazo zonke iintlobo zezatifikethi zokuqala ngokweemfuno zomthengi.
4.Could inkampani yakho ukwenza OEM / ODM iimveliso?
Ewe, singayenza i-OEM/ODM kwaye sinako ukuphuhlisa ukubumba okulungiselelweyo ngokwemfuno yomxhasi.
5.Iphi imarike yakho ephambili?
Iimveliso zethu zithandwa eYurophu ezifana neJamani, iBritane, iFransi, iItali, iSpain, iRashiya, iNetherlands, iPoland, kunye nommandla waseMntla Melika, ummandla waseMzantsi Melika, ummandla woMbindi Mpuma kunye nommandla waseMzantsi Asia.
Ngaphambili: ISixokelelwano soMthombo weSilico seBanga lezoNyango eliValwe iSixokelelwano sokuKhusela amanxeba
Okulandelayo: IBanga lezoNyango lePVC elivaliweyo lweSixokelelwano soMbhobho weSifo seNtwasahlobo
isipontshi somlomo esilahlwayo
intonga yesiponji yonyango
iswab yokucoca ngomlomo